ओलीको पहिलो घोषणा सार्थकताको बाटोमा : विकट क्षेत्रमा पनि सीटीईभीटीको पहुँच (भिडियो सहित)
काठमाडौं, २ चैत–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार सम्हालेको दिन सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् सीटीइभीटीलाई विस्तार गर्ने बताएका थिए ।
सिपको विकासमा लागि प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिएपछि सीटीईभीटीका अधिकारीहरु हौसिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले ले नै सात प्रदेशमा सीटीईभीटीलाई विस्तार गर्ने भनेपछि प्राविधिक शिक्षामा सरकार गम्भीर बन्ने देखिएको सीटीइभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए । लोकान्तर डट्कमको कार्यक्रम लोकान्तर सोमा बोल्दै वाग्लेले देशमा रोजगारीको अवसर बढाउन प्राविधक शिक्षाको ठूलो सहयोग पुग्ने बताए ।
अव सातैओटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यलयको स्थापना गर्ने र विकट क्षेत्रमा पनि सीटीइभीटीको पहुँच अझ सशक्त बताएर लैजाने उनले बताए ।
नेपालमा भएका प्राकृतिक साधनलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नको लागि नेपालमै दक्ष कामदारको आवश्क भएकाले अब सीटीइभीटीको ध्यान त्यस तर्फ भएको उनको भनाइ थियो ।
अहिले सामुदायीक विद्यालयमा सीटीइभीटीको प्राबिधीक शिक्षा पढाउन शुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
चैत २, २०७४ मा प्रकाशित
अर्याल लोकान्तरका फोटो पत्रकार हुन् ।
कलंकीको अन्डरपास छिट्टै सञ्चालन हुने, अब कसरी चलाउने गाडी ? [भिडियो रिपोर्ट]
ट्राफिक नियम मिच्नेहरू होसियार, सितारामको चस्माले रेकर्ड गर्ला !
आठ जनाका कारण रोकियो तीनकुनेको पार्क ! (भिडियो रिपोर्ट)
प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउनु अत्याचार हो - स्वामी महेश्वरानन्द [भिडियो अन्तर्वार्ता]
प्रचण्डलाई नेता मान्न तयार छौं, जेठ १५ अगावै एकता हुन्छ : विष्णु रिजाल [भिडियो अन्तर्वार्ता]
यातायात व्यवसायीको उल्टै हुंकार, हामीलाई नसोधी रुट परमिट किन दिएको ? [भिडियो अन्तर्वार्ता]